Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Limpopo oo guddoomiye doortay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Limpopo oo guddoomiye doortay “SAWIRRO”
Xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu sagootinayay Gudoomiyihii hore Gobolka Limpopo ee Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay Magaalada Polokwane ee wadankaasi.
Xafladani ayaa waxaa ka soo qeybgalay Madaxda Safaaradda Soomaaliyeed ee Dalkani mas’uuliyiin ka socday Dowladda Koonfur Afrika Waxgarad, Ganacasto iyo qaar ka mid ah Madaxda Jaaliyadaha Dalka, iyadoo halkaasina laga jeediyay khudbado.
Dadkii ka hadlay madasha Xafladda ayaa intooda badan u mahadcelinayay Gudoomiyahii hore iyo waxqabadkiisa iyagoo dhanka kale kula dardaarmayay Gudoomiyaha la calaameyo saarayay inuu xilkiisa ugu so baxo si hufnaan leh.
Gudoomiyihii hore ee Jaaliyadda Limpopo Dr Maxamed Cabdullahi oo hadalo kooban ka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsanahay inuu xilka ku wareejiyo Gudoomiyahan cusub kadib muddo badan uu arimaha Jaaliyadda wax kasoo qabtay waxa uuna kula dardaarmay Gudoomiyaha cusub inu howshaasi halkaasi kasii wado.
Madaxdii ka socotay Dowlad Goboleedkaasi ayaa iyana dhankoodii Ganacsatada Soomaalida ku amaanay isku xirnaan,waxa ay dhinaca kale ballanqaadeen inay la shaqeyn doonaan cid walboo ay Soomaalida soo doorato.
Gudoomiyaha cusub ee la caleema saarayay Daahir Xasan Hilowle oo khudbad ka jeediyay Xafladda ayaa ugu horeyn u mahadceliyay dhamaan dadkii ka soo qeybgalay iyo Gudoomiyihii hore,waxana sheegay in ay isku duubni sameeyaan Jaaliyadda.
“Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo Gudoomiyihii hore ee Gobolkan Limpopo oo sharafta mudan si xorriyad ah xilka u wareejiyay,waxaa kaloon rabaa guddigii guurtada ee Limpopo oo har iyo habeen u taagnaa sidii ay u mideyn lahaa,waxaan rabaa inaan hortiina ka cadeeyo sidii la ii doortay inaan Umadda si daacad ah ugu shaqeeyo”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Ugu dambeyntii siihaya Xilka Safiirka ahna Xoghaya koowaad Mudane Ismaaciil Cabdalla Soomane oo isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay Xafladda ayaa ku dhiiragaliyay Jaaliyadda inay isku xirnaadaan kuna xirnaadaan Safaaradooda isagoo ballanqaaday in Safaaradda kaalinteeda ka qaadan doonto u adeegidda Jaaliyadda.
“ Reer Limpopo hadii aad tihiin waxaan u baahanahay inaad hogaan u noqotaan Jaaliyadaha imaan doono hadii Illah yiraahdo,wax badan ayaa qabsoomi doonaa waxaan u baahanahay midnimo waxaan u baahanahay inaad gacmaha is qabsataan waxaan u baahanahay inaad Qaranka taakuleysaan waxaan u baahanahay inaad Safaaradda taakuleysaan idinka naftigiina is caawisaan,in maamulka aad sameysateen inaad la shaqeysaan”. ayuu yiri Ismaaciil.
Gabagabadii Xafladda ayaa waxaa Shahaadooyin la gudoonsiiyay qaar ka mid ah Xubniha ugu firfircoonaa u adeegidda Jaaliyadda ,waxa ay Xafladda ku soo idlaatay jawi wanaagsan.
C/qaadir Axad Warbaahinta Qaranka,Limpopo K/Afrika
Muungaab oo qado u sameeyey salaadiin Soomaliyeed oo horkacayey Boqor Burhaan-Sawirro